VÉRITÉS ALTERNATIVES – Chuu Wai Nyein
Homesolo exhibitionsVÉRITÉS ALTERNATIVES
Since exhibiting in Yangon, Chuu Wai Nyein artwork, focused on female identities and empowerment, has gained her plaudits among the small but burgeoning art scene of Myanmar. It incorporates her trademark dichotomy: paintings of women trapped by tradition juxtaposed with images of liberated, sexy, and thoughtful women. “Vérités Alternatives” is the latest showcase of her talents and opens this December withacollection of symbolically layered paintings that both reveal and conceal.
ခြူးဝေငြိမ်းဧ။် အနုပညာလက်ရာများသည် အမျိုးသမီးတို့ ကိုယ်ပိုင်အာဏာခွန်အား ဝိသေသလက္ခဏများ၊ အည့ံခံ အောက်ကျို့ မှုများ နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် အကြောင်းများစွာကို ရေးဆွဲကာ ပြသခဲ့ဖူးပြီ။ ပြသခွင့် နယ်ပယ် ကျဉ်းမြောင်းသော်လည်း မြန်မာပန်းချီလောကတွင် သတိထားမိစရာ ပြပွဲလေး တစ်ခုအဖြစ်အမှတ်ရစေခဲ့သည်။ ထိုအမှတ်ရစရာများထဲတွင် သူမဧ။် အနုပညာဖန်တီးမှု အမှတ်အသား တခုဖြစ်သည့်ရိုးရာကနုတ်ပန်း ၊ ရိုးရာ ဒီဇိုင်းများ ဖုံးလွှမ်း ချုပ်နှောင်ကာ ပျောက်ဆုံးနေသော အမျိုးသမီးများနှင့် ရုန်းထွက် လွတ်မြောက်လာသော အတွေးအမြင်ရှိ စွဲဆောင်မှုအားပြင်းပြင်း မိန်းမလှများကို အတူယှဉ်တွဲ ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု “Vérités Alternatives” ပြပွဲသည်လည်း ထိုနည်းဆန်စွာ ထုတ်ဖော် ဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့် လျှို့ဝှက်ထိန်ချန်ထားခြင်းများကို သင်္ကေတဆန်ဆန် ပေါင်းစပ်ထားသော ပြပွဲတစ်ခု
Depuis que Chuu Wai Nyein expose à Yangon, son travail artistique, centré sur l’identité et l’émancipation féminines,areçu un accueil très favorable sur la petite mais florissante scène artistique birmane. Son art est marqué par la dichotomie entre les peintures de femmes prisonnières de la tradition et d’autres qui représentent des femmes sexy, libérées et réfléchies. “Vérités Alternatives”, qui est la dernière démonstration de son talent, aura lieu en décembre avec une collection de peintures qui tantôt révèlent, tantôt dissimulent.
After her last exhibition, “Synonym of Self”, Chuu Wai Nyein had the opportunity to travel abroad, living for some time in New York and Paris. This uncommon trip helped her to put into perspective women’s lives in Myanmar through comparison with the experiences of women in the USA, France and other parts of the world. She noticed that stories travel across the world – translated, summarized, translated again – and witnessed that women’s situations are different but also curiously similar wherever you are, in Paris or Mandalay. The interplay between the information processing role of the media and the inequality of gender relationships is at the core of her new exhibition, “Vérités Alternatives”.
ခြူးဝေငြိမ်းသည် “ကြောင်းတူရုပ်ကွဲ (Synonym of Self)” ပြပွဲအပြီးတွင် နယူးယောက်မြို့နှင့် ပဲရစ်မြို့များတွင် လအတော်ကြာ သွားရောက် နေထိုင် လေ့လာ လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ထိုခရီးစဉ်သည် သူမကို အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ကမ္ဘာ့အခြားဘက်ခြမ်းမှ အမျိုးသမီးတို့ ဧ။် ရှင်သန်မှုဘဝများကို သိမြင်ထိတွေ့စေကာ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်မှု အတွေးသစ်များကို အခြေပြုစေခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကို ဖြတ်သန်းကာ ခရီးထွက်နေကြသော ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းများဧ။် အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းကို သူမသတိထားမိလာခဲ့သည်။ အသွင်ပြောင်းသည်၊ အကျဉ်းချုပ်သည်၊ ထပ်ပြီး အသွင်ပြောင်းကြပြန်သည်။ ပဲရစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ မန္တလေးဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ် ကွဲပြားသော အနေအထား အရပ်ရပ်မှ အမျိုးသမီးတို့ဧ။် တူညီခြင်းအခြေအနေများရှိသည်။ မီဒီယာ သတင်းပြုပြင် စီမံခြင်းများနှင့် ကျား၊မ မညီမျှမှုတို့ အပြန်အလှန် သက်ရောက် အားပြိုင်မှုသည် ယခုပြပွဲ ဧ။် အဓိက ကျောရိုး ဖြစ်လာရသည်။
Après sa dernière exposition, “Synonym of Self”, Chuu Wai Nyeinaeu l’occasion de voyager à l’étranger etavécu plusieurs mois à New-York et à Paris. Ce périple hors du commun luiapermis de mettre en perspective la vie des femmes birmanes avec celles des femmes américaines, françaises et de bien d’autres pays. Elleaainsi pu constater que les récits voyagent autour du monde – traduits, résumés, traduits encore. Elleaégalement été le témoin privilégié des différentes conditions féminines mais qui sont aussi, parfois, curieusement similaires où que vous soyez, à Paris ou Mandalay. L’interaction entre le traitement de l’information des médias et les inégalités des relations entre les sexes est au cœur sa nouvelle exposition “Vérités Alternatives”.
Chuu Wai Nyein collected print media in Paris and vintage newspapers from Myanmar to show the contrast between societies and to highlight the relative inertia of Burmese cultural values. The background of print in the artwork calls our attention to the busy world of language, culture, of the on-going back and forth of information, travelling across the world, translated and translated again. Layered on top of the newsprint are acrylic images of female identities, some contained others confident, all navigating their way through the information age.
လူနေမှုဝန်းကျင် ခြားနားမှုနှင့် မြန်မာယဉ်ကျေးမှု စံနှုန်းများကြောင့် လေးကန်ဖင့်တွဲစေခြင်းများကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း နှိုင်းယှဉ် ခံစားနိုင်ရန် ပဲရစ်မှ စုဆောင်းခဲ့သော သတင်းစာများနှင့် မြန်မာ့ခေတ်ဟောင်း သတင်းစာများကို အတူတကွ ယှဉ်ပြိုင်ကာ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားသည်။ ပန်းချီကားတိုင်းဧ။် နောက်ခံများသည် ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သွားလိုက် လာလိုက် လွန်းထိုးနေသော သတင်း အချက်အလက်၊ ကမ္ဘာကို ဖြတ်သန်းသွားသော ခရီး၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်း — စသော အရာများစွာက ရှုပ်ယှက်ခပ်နေသော ကမ္ဘာကြီးအနေဖြင့် အာရုံဖမ်းစားထားသည်။ ထိုသတင်းစာစက္ကူများပေါ်တွင် ယုံကြည်မှုရှိသော အမျိုးသမီး ပုံရိပ်တချို့နှင့် သတင်းခေတ်ကို ကိုယ်တိုင်ပဲ့ကိုင်ဖြတ်သန်းလာရသော အမျိုးသမီးပုံရိပ်များကို တွေ့ြ
Chuu Wai Nyeinarecueilli des coupures de presse française à Paris et des fragments d’anciens journaux birmans pour souligner le contraste entre les deux sociétés et pour mettre en exergue l’inertie des valeurs culturelles birmanes. L’arrière-plan des œuvres attire notre attention sur l’univers animé du langage, de la culture, sur le va-et-vient perpétuel des informations qui traversent la planète et qui sont traduites encore et encore. Couchées sur le papier journal, on peut apercevoir diverses images acryliques d’identités féminines, certaines confiantes, toutes cherchant leur propre chemin à l’âge de l’information.
Chuu Wai Nyein’s work is her disconcerting interpretation of the official “Truth” that is given about women in Myanmar. Are they really different from the other women? Is there one true unique situation of women across the world? Or are there as many truths as different languages? And what is the truth of those who grew up inadifference world? The “Vérités Alternatives” exhibition is an invitation to think about this, beyond any cultural, mental and linguistic boundaries.
မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော တရားဝင်အမှန်တရားတို့ဧ။် အနက်အဓိပ္ပယ် ကောက်ခြင်းကို မကျေလည် ဖြစ်နေသော ပန်းချီကား ဖန်တီးမှုများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တကယ်ပင် အခြားအမျိုးသမီးများနှင့် ကွဲခြားသလား။ ကမ္ဘာတဖက်ခြမ်းမှာ အမျိုးသမီးတို့အတွက် ပြိုင်ဘက်ကင်းအမှန်တရား တခု တည်ရှိလေသလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာစကားများစွာရှိသကဲ့သို့ အမှန်တရားများစွာ ရှိမလား။ ခြားနားသော ကမ္ဘာများစွာမှ ရှင်သန်ကြီးပြင်းလာကြသူများအတွက် ဘယ်အရာသည် အမှန်တရားဖြစ်သနည်း? မေးခွန်းပေါင်း များစွာကို မည်သည့် ယဉ်ကျေးမှု၊ စိတ်စွမ်းရည်နှင့် ဘာသာစကားတို့ဧ။် နယ်နမိတ်ကန့်သတ်မျဉ်းများကိုမဆို အတွေးများဖြင့် ဖောက်ထွက် ကျော်လွန်ရန်် “Vérités Alternatives” ကို အတွေးနယ်ချဲ့ပွဲတခုအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။
Le travail de Chuu Wai Nyein est une déconcertante interprétation de la ‘vérité’ officielle qui est donnée sur les femmes en Birmanie. Sont-elles vraiment différentes des autres femmes ? Y a-t-il une seule et unique véritable condition féminine autour du monde ? Ou, au contraire, existe-il autant de vérités que de langues différentes? L’exposition “Vérités Alternatives” est une invitation à y réfléchir au-delà de toutes frontières culturelles, mentales et linguistiques.